मनाेरञ्जन Archives - Page2of 15 -
Home > मनाेरञ्जन (Page 2)
कर्णालीका ‘देउडा सम्राट’ नेत्र, ४२ वर्षदेखि देउडा धान्दै
Mohan Shahi February 2, 2020 February 2, 2020 mophosala, special_four, मनाेरञ्जन, मुख्य खबर, साहित्य	0
कालिकोट । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ गैरामा जन्मेका नेत्रराज शाही अहिले ५८ वर्षका भए । २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएका नेत्र हाल जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका रूपमा कार्यरत छन् । कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको मौलिक संस्कृति हो देउडा । उतिबेला बाइसे राज्य हुँदा कर्णालीमा २२ राज्य थिए
म्यूजिकमा भविष्य खोज्दै स्वणीम शाही
Mohan Shahi December 12, 2019 December 12, 2019 mophosala, special_four, मनाेरञ्जन, मुख्य खबर, साहित्य	0
कालिकोट । जनयुद्धका बाल कलाकार स्वणीम शाहीको देउडा गीत ‘चलन चलीया’ सार्वजनिक भएको छ । मध्य तथा सुदुरका साथै कर्णालीको कला, संस्कृति र पर्यटनको पहिचान सहितको देउडा गीत ‘चलन चलीया’ सार्वजनिक भएको हो । पश्चिम नेपालको कला, संस्कृति र पर्यटनको पहिचानका साथै खस भाषको उग्म थलो कर्णालीको पहिचान दिने उद्देश्यले गीत
इलिमिनेट हुँदै फिर्ता आयका राम नै बने द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२’ का विजेता
Mohan Shahi December 7, 2019 December 7, 2019 mophosala, special_three, मनाेरञ्जन, मुख्य खबर	0
काठमाडौँ । अन्तराष्ट्रिय गायन रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२’ को विजेता बनेका छन् राम लिम्बु । उनि कोच प्रमोदको तर्फबाट अन्तिम चार प्रतिस्पर्धी भएर फाइनलको यात्रा तय गर्न सफल भएका थिए । वास्तवमा ब्लाइन्ड अडिसनमा भने राम लिम्बु कोच दिपकोमा गएका थिए । तर पछी कोच दिपले इलिमिनेट गरेपछि
म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
Mohan Shahi October 24, 2019 special_four, मनाेरञ्जन	0
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा आयोजना हुँदै आएको म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको ८ औं संस्करणको उत्कृष्ट पाँचको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ । ‘सांस्कृतिक पर्यटन– कलासंस्कृतिको प्रबद्र्धन’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ आन्तरिक रुपमा सांस्कृतिक पर्यटन बढाउन यो अवार्डले विशेष भूमिका खेल्ने आयोजक पक्षले लक्ष्य लिएको छ । शुभकामना मिडिया सोलुशनको
Mohan Shahi October 22, 2019 special_three, अपराध, मनाेरञ्जन	0
काठमाडौं। देउसी भैलोको गीत बिगारेर सामाजिक सहिष्णुता बिगारेको आरोपमा गायक दुर्गेश थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अपराध महाशाखाले मंगलबार गायक थापालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तिहार लक्षित गरी दुर्गेशले गाएको ‘तिहार गीत’लाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यलाय काठमाडौंमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले थापालाई बोलाएको थियो। उक्त गीतमा, धुमपान,
अवार्डको प्रलोभन देखाएर गायिकालाई यौन प्रस्ताव गर्ने बुढामगर बर्खास्त
Mohan Shahi October 16, 2019 special_four, मनाेरञ्जन	0
काठमाडौँ । कलाकार छिरिङ डोमा शेर्पा ‘जेन्निफर’ले कलाकार संघ युएसएका वर्तमान अध्यक्ष तथा ‘वर्ल्ड नेपाली म्युजिक अवार्ड २०१९’ का आयोजक संस्थाका महासचिव सुमन बुढामगरले आफूलाई पटक–पटक इमोसनल ब्लकमेलिङ गर्दै सेक्सुअल हर्यास्टमेन्ट गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै सो कुरा बाहिर ल्याएकी हुन्
‘नहेर ऐनामा’ बजारमा
Mohan Shahi September 25, 2019 मनाेरञ्जन	0
काठमाडौँ । नेपाली गीतसंगीत पछिल्लो समयमा अलि कमै मात्रामा बजारमा आएका हुन् कि भन्ने दर्शक सोर्ताको चासो गुनासो रहेको छ । गीतसंगीतको बजार खस्किदै गएको एकाथरिको भनाई छ । तर, पनि बजारमा गीतसंगीत आउने क्रम भने रोकिएको छैन । गीत संगीतबिना हामी अधुरो र अपुरो रहन्छौं । त्यही भएर गीतसंगीत
रेशमको कविताः वाह ! क्या जाती हुन्थ्यो !
Mohan Shahi September 20, 2019 special_two, मनाेरञ्जन	0
कविताः वाह ! क्या जाती हुन्थ्यो ! खैर तिम्रो खुसीमा हामी पनि हाँस्न पाए क्या जाती हुन्थ्यो। अनि संसारमा सबै नेपालीको शिर क्या माथि हुन्थ्यो । धेरै वर्षपछि बन्यो संविधान संविधानको हरपलहरूमा हाम्रो पनि अधिकार मिसिए क्या जाती हुन्थ्यो । अनि बल्ल तिम्रो विजय जुलुसको हलरमा चारवर्ण छत्तिस जातको क्या ताँती हुन्थ्यो । सारा संसार हाम्रो खुशी देखेर दंग पर्थे अरे वा !
‘पिरतीको खेल बरिलै’ भिडियोसहित
Mohan Shahi September 17, 2019 September 17, 2019 मनाेरञ्जन	0
काठमाडौँ। लोकप्रिय गायिका विष्णु माझी र हर्खसिं गुरूङको स्वरमा नयाँ गीत बजारमा आएको छ। ‘पिरतीको खेल बरिलै’ बोलको गीतमा निर्मल क्षेत्री र शृष्टि खड्काको अभिनय रहेको छ। यस गीतको शब्द संगीत सुजन लम्सालको रहेको छ। मौसम हिमालीले यस गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका छन्। पटिल्लो समयका लोकप्रिय मोडल निर्मल क्षेत्रीका अनुसार